Ezimweni zanamuhla izindonga in the amafulethi ngokwethukela aqine. Abaningi kithi ufisa ukuba sihlehlise izindlu zabo, ukwethula ku ingaphakathi ukuma engavamile kanye nokuqalisa imiklamo abawuthandayo. Ekuqaleni kufanele ucabangele lapho udonga kuhlukane efulethini izotholakala. Ngaphezu kwalokho, izinto ekhethelwe yokukhiqiza. Lokhu kungaba ishidi noma Magnesite RSD-esishubile. Kodwa izinto esivame kakhulu kwezindonga kunesitha okwakhiwa ngalo la mabhodi. He is enemisebenzi lisetshenziswa futhi kulula ukufaka, kungakhathaliseki egumbini.
Gypsum plasterboard ukwahlukanisa izindonga efulethini kumele afakwe kuhambisana nemithetho kubaluleke kakhulu. Okokuqala udinga ukuqoqa uzimele we amaphrofayli metal, futhi ngaphakathi kuwo ukubeka konke ukuxhumana kudingeka. Okulandelayo, amabhodi sheathing Gypsum, okungase camera topcoat. Kungaba umdwebo noma wallpapering. Isikhathi esining impela, abanikazi amakhaya ukhethe engaba Izindonga zangaphakathi. Babukeka zikanokusho aesthetically ukujabulisa, ngaleyo ndlela egcizelela umnikazi ukunambitheka kanye okusuka.
Ukufakwa ngodonga efulethini zingahlukaniswa izigaba. Isinyathelo sokuqala siwukuba mshini indawo sephrofayela izindonga floor. Ngo inqubo yokubala kufanele inake kobukhulu imininingwane, okuzokwenza sinomthelela okwakhiwa ngalo la mabhodi ezakhiwe. Ngaphezu kwalokho unamathisele uphawu itheyiphu ku nangaphandle kwe- iphrofayli ensimbi.
Ukufaka wezangaphakathi engaba izindonga, yamba izimbobo at ibanga cishe amahlanu ngamasentimitha. Isinyathelo esilandelayo kuhilela nokubopha ifremu phansi. Ngaphezu kwalokho, uhlangana iphrofayela udonga futhi ahambelana yomthofu wokumisa noma ukwakhiwa ezingeni. Ucedzela lokhu esigabeni se-fixing Uhlaka ophahleni.
Isinyathelo sesithathu izindonga ukufakwa - ngokubeka ku amanethiwekhi zokuxhumana. Ukuze wenze lokhu, imigodi kwakhiwa phakathi uprights, wabeka corrugation. It yenzelwe ukuvikela ikhebula kusuka kunoma iyiphi umonakalo futhi kuvimbele imiphumela yomlilo uma kunengozi yomlilo. Lokhu kusiza ekubambeni igesi engaxubani namakhemikhali. Uma ukwahlukanisa efulethini lizoqukatha ibhokisi lukathayela, ungakwazi kalula okunye esikhundleni ikhebula, okuyinto iye yawohloka. Ukuze wenze lokhu, ufuna ukuhlanganisa uxhumano nomsebenzisi komunye umkhawulo ikhebula entsha, kodwa okuphambene - ukuyikhipha isakhiwo.
Isinyathelo sesine Ukunquma plasterboard uzimele. Ukuze yasibamba yayo iphrofayili ngezikulufo metal asetshenziswa. Zibonele wena ke ukuthi beniyingxenye Uhlaka kumuntu hhayi ngaphansi kuka eyodwa isentimitha ukujula. Kulokhu ikhanda isikulufa Kufanele kube elilodwa milimitha echibini ku metal ishidi.
Ngaphambi ukwahlukanisa kule flat uzobe ukusikiwa ngokuphelele, isikhala layo langaphakathi ligcwele polystyrene enwetshiwe noma amaminerali uvolo. Khona-ke okwakhiwa ngalo la mabhodi enamathiselwe ehlangothini lwesibili ngendlela efanayo.
Ukuhlanganisa isinyathelo sokuqondisa zihlanganisa ukusebenzisa putty kuya yokuqedela surface futhi okwalandela ezipholisha ungqimba. Lapho iningi umsebenzi usuphothuliwe, ungakwazi namathisela phezu lodonga noma ukupenda ahlula e umbala oyifunayo.
Uyini ukupholisa ngenkani?